Nzira yekupikorora makwikwi angu uye kuona Amazon yavo yekutengesa mazita e keywords?
Ngatitangei kusvika pakaderera pasina kunonoka. Kuziva kukosha kwekuzvichengeta iwe nguva dzose pamusoro pekutsvaga kutsvaga kutsvaga uye zvakanakisisa-kukunda mazwi ezvinyorwa zvinoshandiswa zvakashandiswa nemutengesi wese wekutsvaga muIndaneti nepamusoro Amazon mutengesi uwandu - hezvino zvinhu zvitatu zvinoshandiswa-zvakaratidzwa keyword zvinyorwa kuti iwe utange kufamba zvakanaka, kukwikwidza kutsvakurudza. Pakupedzisira, kushandisa zvakanakisisa kutsvaga nekukwirira kwemashoko makuru ekubatanidza kwevadzidzi vako vanobudirira zvikuru kuAmazon. Saka, pano ivo.
Google Keyword Planner - inofanira kuva yako yekutanga yakawandisa izwi rekutsvakurudza ruzivo runogona kukurumidza kukupa mufananidzo mukuru wemashoko ose anokosha uye Zvose zvemashoko akafanana ezvinyorwa zvinowanikwa, izvo zvinoverengerwa pamatsva ekutsvaga kwenyika inotungamirira injini yekutsvaga. Chinhu ichi ndechokuti izvi zvinoshandiswa zvinogona kuva zvakanaka kwauri - kunyange kana uchida kutarisa Amazon seller ranking nekuda kwemashoko makuru - افضل شركات عزل الاسطح بالافلاج. Zvechokwadi, Google Keyword Planner haisi yakananga sezvinoitwa neshumba yekwikwidzikwi yekutsvakurudza zvishandiso uye inowanikwa muInternet zvakanyatsorongedzerwa kutevera Amazon mutengesi kushandiswa kwemashoko makuru ezvinyorwa. Kunyange zvakadaro, ndinenge ndichiri kushandisa izvi zvisiri izvo, kunze kwenguva dzose. Uye iyo inogonawo kuva yakanaka yekutanga yemakwikwi enyu ekutsvaga keyword ku Amazon. Cherechedza, zvisinei, kuti kushandiswa kweizvi shandura iripo kune isu tose hakuchakwanisi kuti iwe uve mutengesi anobudirira kuAmazon. Ndinoreva kuti iwe uchafanirwa kusarudza chinhu chimwe chekutsvaga chekutevera pamusoro peiyo imwe chete - saka funga izvi zvinotevera kuti utarise Amazon muwandisi wekambani yako nekuda kwemashoko akaita se pro real.
SpyFu - iyo inokosha yekutanga kunyora zvombo zvakanyatsogadzirirwa kutsvaga vadzikwi vako uye kubatsirwa kubva pane zvakanakisisa zvavakawana kwete kwete chete uye nekodzero yekutsvakurudza mashoko, asi neimwe nzira ye SEO unogona kufungidzira (i. e. , backlink profile, general optimization strategy, pamwe chete nedzimwe mimwe mitero inoshanda kuti ishandiswe iwe pachako). Uye iwe unogona kuisa nyore nyore Amazon yako mutengesi uwandu hwekutsvaga zvinyorwa zvinyorwa-kungovhura zvose zvinodiwa kwenguva refu-muswe mazano uye kukosha kwekukwikwidza zvakananga kubva kune vavanopikisana nevashambadzi vayo mumisika yako yekarakiti kana mukati memumwechete mhizha muAmazon. Zvichida chinhu chakaipa chete pamusoro peSpyFu ndechekuti mazai ayo ose akazara anowanikwa kune chimwe chinhu chakakomba makumi matatu emwedzi pamwedzi. Kunyange zvakadaro, shanduro yayo yekusununguka yakanga yakanaka kwandiri, ndinofanira kubvuma.
SECockpit - chimwe chimwe chinhu chikuru chikuru chinyorwa chekushandisa chinogona kukubatsira kuti uone Amazon seller ranking chero ipi zvinyorwa uye nguva refu-mutsva yekutsvaga mishoko inoshandiswa nevararama vari kurarama kwete ecommerce platforms, asi pane imwe nzvimbo paIndaneti mukati meGoogle index. Pakati pezvikamu zvaro zvinotonhorera, ndainakidzwa chaizvo nekukwikwidzana kwemashoko makuru ekutsvakurudza. Zvose zvakanga zvichishanda zviri nyore uye nenzira yakanyatsonaka. Ne SECockpit, mutengesi mumwe nomumwe weAmerica anogona kunzwisisa nokukurumidza zvinoshanda zvakanaka uye izvo zvinofanira kuchinjwa kana zvichida zvakadzokororwa - maererano nepamusoro-soro izwi rinowanikwa kare rinoshandiswa nevatengesi vanotungamira mune zvigadzirwa zvako muAmazon, uye zvichida pane chero ipi zvayo yakakurumbira ecommerce platform se eBay, Walmart, etc.